Top News कुवेतमा बिज्ञप्तीको जुहारी | नेपालीको शिर झुक्नेनै हो त ? | दावाले न्याय पाउन | भोजपुर सेवा समाज कुवेतको बार्षिक उत्सब तथा अधिबेशन हुँदै | नेपाली घरेलु कामदारलाई खाडीमा न्युनतम ३ सय डलर तलव दिनैपर्ने | खोटांग कुवेत संपर्क मंचद्वारा प्रा.बी. सुन्तले लाई आर्थिक सहयोग | खेलकुदका केहि रोचक बिषय
2013-07-08 | उदासि
भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी मैदानमा हुनु र नहुनुको फरक गत शुक्रबार क्यारेबियन भूमिमा देखियो । वेस्टइन्डिज, श्रीलंकासहितको त्रिकोणात्मक क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि भारतीय टोली क्यारेबियन भूमिमा छ । लगातार दोस्रो हारपछि तेस्रो खेलमा भारतले आयोजक वेस्टइन्डिजलाई १०२ रनको भारी अन्तरले हरायो । तर, भारतको फराकिलो जितभन्दा पनि मैदानभित्र दुई प्रमुख खेलाडीबीचको झगडाले बढी चर्चा पायो । अलराउन्डर रवीन्द्र जडेजा र बायाँहाते ब्याट्सम्यान सुरेश रैना खेलिरहँदा झगडा भएको थियो । भारतीय टेलिभिजनहरूले घटनालाई बारम्बार प्रसारण गरी राष्ट्रको बेइज्जत भएको संज्ञा दिएका छन् । दृश्य हेर्दा सामान्य छ । तर, घटनाको प्रकृति हेर्दा भने दुईबीच लामो समयदेखि द्वेष रहेको देखिन्छ । भारतीय मिडियाका अनुसार जडेजाको ओभरमा रैनाले सहज क्याच छुटाएका थिए । सोही क्याचको विषयलाई लिएर दुवैबीच मैदानमा झगडा भएको भारतीय एजेन्सीले जनाएका छन् । भारत जितनजिक पुग्दा कार्यबाहक कप्तान विराट कोहलीले जडेजालाई बलिङ गर्न लगाएका थिए । नियमित कप्तान धोनी चोटका कारण तेस्रो खेलमा सहभागी भएका थिएनन् । जडेजाले २५औँ ओभरमा बलिङ गर्दा विकेटकिपर दिनेश कार्तिकको �ग्रिप�बाट उछिटिएर बल दोस्रो स्लिपमा रैनाले सुनिल नारिनेको क्याच मिस गरेका थिए । त्यसपछि ३२औँ ओभरमा केमार रोचको अकासिएको क्याचलाई पुन: रैनाले क्याच लिन सकेनन् । रैनाले नारिने र रोचको क्याच नसमातेपछि जडेजाको रिस नाकसम्म पुगिसकेको थियो । ओभर सकिएपछि जडेजा सीधै रैना भएको स्थानमा पुगे । दुवैबीच सामान्य कुराकानी भयो । जडेजा रिसाउँदै रैनासँग झगडा गर्न लागे । रैनाले जडेजाको गर्दनतिर हात राखेर पछाडि धकेल्ने प्रयास गरेका थिए । कार्यबाहक कप्तान विराट कोहलीले दुवै खेलाडीलाई सम्झाउने प्रयास गरे । कोहलीले नसकेपछि सिनियर खेलाडी इशान्त शर्माले पनि दुवै खेलाडीलाई सम्झाए । तर, उनीहरूले मानेनन् । खेल सकिएपछि रैना र जडेजासँगै पेभेलियनमा फर्के पनि कुराकानी भएन । यसविपरीत अन्य खेलाडी आपसी कुराकानी गर्दै मैदानबाट बाहिरिएका थिए । एजेन्सीहरूले दुवै खेलाडीबीच आपसी दुस्मनी भएको दाबी गरेका छन् । रैना र जडेजा इन्डियन प्रिमियर लिगको चेन्नाई सुपरबाट खेल्छन् । यता, भारतीय क्रिकेट बोर्डले घटनाको छानबिन गर्ने भएको छ ।
लन्डन, २२ असार
फ्रान्सेली टेनिस सुन्दरी मारिओन बार्तालीले यस सिजनको विम्बल्डन ग्रान्डस्लाम टेनिसको महिलातर्फको उपाधि जितेकी छिन् । शनिबार भएको फाइनलमा जर्मनीकी सेबिन लिसिकीलाई ६�१ र ६�४ को सोझो सेटमा पराजित गर्दै बार्ताली विम्बल्डनको नयाँविजेता बनिन् ।
१५औँ विश्व बरियताकी बार्तालीले जर्मन प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिन् । २८ वर्षीया बार्ताेली लनटेनिसमा पहिलो ग्रान्डस्लाम उपाधि जित्ने पाँचौँ बूढी खेलाडी बनिन् । बार्ताेलीले ६ वर्षअघि पनि विम्बल्डन फाइनल खेलेकी थिइन् । त्यसवेला उनी अमेरिकन भेनस विलियम्ससँग पराजित भएपछि उपाधिबाट विमुख भएकी थिइन् । तर, ६ वर्षपछि सशक्त रूपमा सेन्टर कोर्टमा फर्किएकी बार्ताली उपाधि जित्न सफल भइन् । बार्ताेलीलाई विश्व बरियतामा २३औँ स्थानकी लिसिकीलाई पराजित गर्न मात्र ८१ मिनेट लागेको थियो । दोस्रो सेटमा खेल केही बिग्रिँदा बार्तालीले कोर्टमै आँसु झारेकी थिइन् । बार्ताेलीले उपाधिका साथ अर्काे कीर्तिमान पनि बनाइन् । उनी सर्वाधिक ग्रान्डस्लाम टेनिस खेलेर पहिलो उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी बनिन् । बार्ताेलीले पहिलो ग्रान्डस्लाम उपाधिका लागि ४७औँ ग्रान्डस्लाम खेलिन् । यसअघि जाना नोभोटनाले सन् १९९८ मा ४५ ग्रान्डस्लाम खेल्दै पहिलो उपाधि चुमेकी थिइन् ।
पहिलो ग्रान्डस्लाम उपाधिसँगै बार्ताली यही सोमबार डब्लुटिएले पहिलो वल्र्ड र्‍याङकिङ सार्वजनिक गर्दा सातौँ बरियतामा पुग्ने भएकी छिन् । बार्ताेली सन् २००६ देखि ग्रान्डस्लाम उपाधि जित्ने पहिलो फ्रेन्च महिला टेनिस स्टार पनि बनिन् । सात वर्षअघि अमेली मउरेस्मोले विम्बल्डन उपाधि जितेकी थिइन् । त्यसयता कुनै पनि फ्रान्सेली महिलाले ग्रान्डस्लाम उपाधि जित्न सकेका थिएनन् । बार्ताेलीलाई यस उपाधिका लागि पनि मउरेस्मोले नै दुई सातादेखि सहयोग गर्दै
आइरहेकी थिइन् ।
क्वाटरफाइनलमा साबिक विजेता एवं शीर्ष बरियताकी सेरेना विलियम्सलाई पराजित गर्दै जायन्ट किलरको उपनाम पाएकी लिसिकी फाइनलमा भने चुकिन् । २३ वर्षीया उनी फाइनलमा
कमजोर देखिइन् । प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको उपाधिका लागि आइतबार शीर्ष बरियताका नोभाक जोकोभिक र दोस्रो बरियताका एन्डी मुर्रे भिड्ने भएका छन् । जोकोभिकले शुक्रबार पहिलो सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिनी जुवान मार्टिन डेल पोर्टालाई पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेका थिए । यस्तै शुक्रबारकै दोस्रो सेमिफाइनलमा मुर्रेले जर्जी जानोविक्जलाई पराजित गर्दै जोकोभिकसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरका हुन् । आइतबार जोकोभिक र मुर्रेबीचको समग्रमा चौथो ग्रान्डस्लाम उपाधि भिडन्त हुनेछ । यस्तै एक वर्षमा तेस्रो भेट हुनेछ । जोकोभिकले दुई वर्षअघि मुर्रेलाई नै पराजित गर्दै अस्ट्रेलियन ओपन उपाधि चुमेका थिए । गत सेप्टेम्बरमा युएस ओपन भिडन्तमा मुर्रेले जोकोभिकलाई पराजित गरेका थिए । यस सिजनको अस्ट्रेलियन ओपनमा पनि जोकोभिकले मुर्रेलाई पराजित गर्दै उपाधि चुमे । केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यी दुईले आफ्नो दबदबा कायम गर्दै आइरहेका छन् । आइतबार पुन: यी दुईबीचको भिडन्तमार्फत विजेताको टुंगो लाग्नेछ ।
म्याड्रिडनै मेरो भविष्य क्रिस्टियानो रोनाल्डो
पोर्चुगिज सुपर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डाले यस सिजन स्पेनमै बस्ने संकेत गरेका छन् । रोनाल्डो यस सिजन पुन: म्यानचेस्टर युनाइटेड फर्कने चर्चा चलेको थियो । गत सिजन क्लब पदाधिकारीसँगको दूरी बढेपछि रोनाल्डोले रियल छाड्ने बताउँदै आएका थिए ।
यस सम्बन्धमा उनले गत साता युनाइटेड पदाधिकारीसँग वार्तासमेत गरेको बेलायती मिडियाहरूले जनाएका थिए । रोनाल्डो र युनाइटेड पदाधिकारीबीचको वार्ताबारे कुनै खबर बाहिर आएको छैन । तर, रोनाल्डोले आफ्नो अभिव्यक्तिमा यो सिजन रियललाई नै रोज्ने संकेत गरेका छन् । हाल फ्रान्सको मोनाकोमा रहेका रोनाल्डोले म्यानचेस्टरसँग आफ्नो गहिरो सम्बन्ध रहे पनि आफ्नो भविष्य रियलमै रहेको बताए । युनाइटेडप्रति सद्भाव राख्दै रोनाल्डोले भने, �सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, म म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई धेरै माया गर्छु, म्यानचेस्टर मेरो मुटुमा छ, तर मेरो भविष्य भने रियलमै देखेको छु ।� रोनाल्डोले सन् २००७ मा म्यानचेस्टर युनाइटेडबाटै अन्तर्राष्ट्रिय क्लब फुटबलमा जम्ने मौका पाएका थिए । युनाइटेडलाई प्रिमियर लिग उपाधि दिलाएका उनलाई सन् २००९ मा प्रशिक्षक एलेक्स फर्गुसनले ८० मिलियन पाउन्डमा रियललाई बेचेका थिए । यद्यपि प्रशिक्षक फर्गुसन र रोनाल्डोबीचको सम्बन्ध उत्तिकै घनिष्ट छ । छुट्टाछुट्टै क्लबमा रहे पनि यी दुईले एक�अर्काप्रति सद्भाव देखाइरहे ।
त्यसैले प्रशिक्षक फर्गुसनले यो सिजन युनाइटेड छाडे पनि क्लबले उनै फर्गुसनलाई प्रयोग गरी रोनाल्डोलाई पुन: ओल्ड ट्राफोर्डमा भित्र्याउने प्रयास गरेको थियो । एक स्पेनिस प्रत्रिकाको समाचारमा रोनाल्डोले युनाइटेड सधैँ आफ्नो मुटुमा बसिरहने प्रतिक्रिया
दिएका छन् । उनले यो सिजन म्याड्रिडमा स्पेनिस ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग उपाधिका लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए । �म्याड्रिडमा उपाधिका लागि यस सिजन निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ, साथै च्याम्पियन्स लिगका लागि पनि उत्तिकै मिहिनेत आवश्यक छ,� उनले भने, �साथै मलाई यो सिजन आफ्नो देश पोर्चुगललाई समेत विश्वकपसम्म पुर्‍याउनु छ ।� रोनाल्डोले यसै साताको सुरुवातमा आफूले इंग्लिस फुटबल गुमाउने बताएका थिए । यो सिजन रोनाल्डोका लागि युनाइटेड र रियलले निकै प्रयास गरे । रियलले यो सिजन ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेमारलाई भित्र्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, आकर्षक प्रस्तावलाई लत्याउँदै नेमार कट्टर प्रतिद्वन्द्वी बार्सिलोना पुगेपछि रियल कमजोर बन्ने अवस्था छ ।
रोनाल्डोले पनि छाड्दा क्लब थप कमजोर हुने भएकाले रोनाल्डोलाई बर्नाबेउमै राख्न रियलले हदैसम्मको प्रयास गरेको छ । फुटबल विश्लेषकहरू रियलले रोनाल्डोका लागि आकर्षक प्रस्तावमा मनाएको
विश्लेषण गर्छन् । एजेन्सी